ဝအောင် လာလာခံဦးမှဖြစ်မည်”” – Grab Love Story
အချိန်က ည ၉နာရီခွဲလုပြီ။ ရန်ကုန် မအူကုန်းရပ်ကွက်သည် နေ့လည်ဘက်တွင် လူစည်ကားသလောက် ညနက်လာလျှင် လူအသွား အလာက ပြတ်လာမြဲဖြစ်သည်။ ၁၂၃လမ်းထဲရှိ ‘ထွန်းတောက်’ ဆေးခန်းထဲတွင် ဒေါက်တာကိုလတ်တယောက်ထဲ စာထိုင်ဖတ်နေမိ၏။ မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသည်မို့ ည၈နာရီကျော်လောက်ကတည်းက ဆေးခန်းကို လူနာမလာတော့ … ၉နာရီခွဲ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်အထိတော့ လူနာ မလာလည်း မပြန်သေးပဲ ဆက်ထိုင်နေတတ်သည်က ကိုလတ် အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ စောသေးလျှင် ကားလမ်းပေါ်တွင်ကားတွေက ပြည့်ကြပ်နေတတ်သေးသည်မို့ ကားမောင်းရတာ မောင်းလို့မကောင်း။ .. ၉နာရီခွဲနှင့်ဆယ်နာရီကြားထဲလောက်ဆိုမှ ကားရှင်းပြီး မောင်းလို့ကောင်း၏ တခါတခါတော့လဲ လူနာမလာပါပဲ ထိုင်နေရတာ ပျင်းစရာကောင်းလှသည်။ အလုပ်မရှိတော့ စိတ်တွေကလဲ ဟိုရောက်ဒီရောက် … ။ ဒီနေ့တော့ ကိုလတ်စိတ်ထဲ ရွာမှငယ်ရည်းစား နီလာ့ကို ထူးထူးခြားခြားသတိရနေမိသည်။ .. သူကသာ သတိရနေမိတာပါ … နီလာကတော့ သူ့ကို စိတ်ကူးထဲတောင်ထည့်တော့မည်မဟုတ်မှန်းလဲ သူသိနေသည်။ ရည်းစားဖြစ်ပြီးလို့မှ တနှစ်မပြည့်သေးခင် နီလာ့အမေဆုံးပါးသွားတာ ကျောင်းတက်ရင်း သတင်းကြားလိုက်ရ၏။ .. စာမေးပွဲတွေနှင့်လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေသော ဆေးကျောင်းသားဘ၀မို့ ချက်ခြင်းမပြန်နိုင်သေးပဲ အားပေးစကားတွေသာ လူကြုံပါးလိုက် စာထည့်လိုက် လုပ်နေခဲ့ရသည်။ .. ဟော ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက် လို့ သူလဲ ရွာပြန်ရော သတင်းကောင်းက ဆီးကြိုနေပါတော့သည်။
နီလာတယောက် သူမ၏ပထွေး ကိုကျော်နှင့် အတိအလင်းယူလိုက်ကြပြီတဲ့ … ။ ကောင်းပါသည် .. ကောင်းကြပါပေသည်။ .. သွားလေသူ အမေ့မျက်နှာမှမထောက် .. ။ သူ့မျက်နှာလဲမထောက် … ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမထောက် … လုပ်ပုံ လုပ်ပုံ၊ နီလာတို့လုပ်ချလိုက်ပုံက ကိုလတ်ဆလံသ သွားရသည်။ ရွာကိုလည်း အဲဒီကတည်းက ကိုလတ် လုံးဝမပြန်တော့။ ယိုသူက မရှက်ပေမယ့် မြင်သူက ရှက်သည်လေ .. ။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်နာသည်ဆိုဆို ပထမဆုံးရည်းစားမို့ ကိုလတ် နီလာ့ကို မေ့မရသေး … ။ နီလာ့နှုတ်ခမ်းနွေးနွေးလေးတွေ … နို့အုံထွားထွားကြီးတွေ .. တင်သားအိအိကြီးတွေ .. အိုနောက်ဆုံးတော့ ဆွဲအားကောင်းလှသောစောက်ဖုတ်လေး … တခုမှ ကိုလတ်မေ့လို့ကိုမရ။ .. အင်း ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက ခုတော့ သူ့ပထွေးတဖြစ်လဲ လင်တော်မောင်ကြီး ကိုကျော့်အတွက် အသုံးတော်ခံစရာလေးတွေသာ ဖြစ်နေပေရော့မည် … တောက် … ။ ကိုလတ်တွေးရင်း ဒေါသထွက်လာသဖြင့် တောက်ပင်ခေါက်လိုက်မိသည်။ .. သူငယ်ချင်းတချို့ကတော့ပြောသည်၊ .. ကိုကျော့်မှာ သူ့ထက်ကောင်းကွက်တွေရှိနေလို့ဖြစ်မည်တဲ့ … ။ သူလဲ ဒါတွေအစက သိပ်တော့နားမလည် .. ဆေးကျောင်းသားပေမယ့် စာထဲသာစိတ်နှစ်ထားခဲ့သူမို့ ဒါတွေနှင့် နဲနဲစိမ်းသည်။ ..
သို့ပေမယ့် ရည်းစားလူလုခံရပြီးနောက်တွင်တော့ ကိုလတ် မခံချင်စိတ်နှင့် ဒါတွေ လိုက်စားလာသည်။ လိင်တံကြီးထွားစေသော နည်းလမ်းများရှာသည်။ .. ဆေးထိုးတာတွေဘာတွေ ကတော့ ဘေးမကင်းမှန်း ဆရာဝန်လောင်းပီပီ သူသိသည်မို့ လက်တဲ့မစမ်းခဲ့။ .. ဘေးကင်းသော လေစုပ်ပြွန်တွေ ဘာတွေနှင့်တော့ စမ်းကြည့်သည်။ .. ရလဒ်က မဆိုးလှပါ။ သူ့ဆိုဒ်က ပိုကြီးလာသည်။ .. သန်မာမှုနှင့်သုတ်ထိန်းနိုင်အားလဲ ပိုကောင်းလာသည်။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင်ပြီး တယောက်ဟာပေါ်တယောက် ဂေါ်လီတွေ အပြန်အလှန်ထည့်ကြသည်။ .. သူလဲ သူ့လိင်တံ ကျောဘက်တွင် ဂေါ်လီ၂လုံးထည့်လိုက်သည်။ .. ပြောင်းဖူးစေ့တွေလို လျှောက်ထည့်နေလျှင်တော့ ဘေးလဲ မကင်းသလို ခံရသူလဲ လက်လန်သွားမည်မို့ မထည့်။ .. ၂လုံးလောက်က အနေတော်ပါပဲ။ စိတ်နာနာနှင့် ကိုလတ် ရန်ကုန်တွင် ရည်းစားတွေ ထည်လဲထားပြစ်ခဲ့သည်။ ထားလိုက်သော ရည်းစားတိုင်းကလဲ သူ့ဟာကြီးနှင့် ဂေါ်လီလေးတွေကို တန်းတန်းစွဲ .. ။ အဲ တခုတော့ ရှိသည်။ .. ရည်းစားက ရည်းစားလိုမနေပဲ ယူဘို့အတင်းအကြပ်တိုက်တွန်းလာလျှင်တော့ ကိုလတ် တို့ ဝေးဝေးပြေးတော့သည်။ .. လူပျိုဘ၀နှင့် ရသလောက်ကဲဦးမည်ဟု ကိုလတ် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ .. ဒါတွေအားလုံးကို နီလာ့အစား မိန်းမတွေအပေါ်လက်စားချေနေခြင်း တမျိုးဟု သူ ခံယူထားလိုက်သည် .. ဆိုင်သလား မဆိုင်သလားတော့ မသိ။ .. ဒီလိုနှင့် မနှစ်က သူ ဆရာဝန်ဖြစ်လာသည်။ .. အလုပ်နှင့်အကိုင်နှင့်ဆိုတော့ ကဲရတာ ပိုတင့်တယ်လာ၏ သူ့ကြောင့် အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရသူလေးတွေလဲ တော်တော်များနေပြီ။ နောက်ပြီးသားရေအိုင်တွေကို ခြေ၀င်ဆေးခဲ့တာတွေလည်း မနဲလှတော့။ .. ဆရာဝန်ဆိုတော့ ရှောင်တတ်တိမ်းတတ်တာကော ကံကောင်းနေသေးတာကော ပါမည်ပေါ့လေ .. ကိုလတ်တို့ ခုထိတော့ ပိုက်ဘော မိသည့်ဘ၀ မရောက်သေး။ ကိုလတ်အလုပ်က ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ဆေးရုံကြီးတွင်ဖြစ်သည်၊ .. ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းကိုတော့ လူနာအရများသည့် မအူကုန်းဘက်တွင် ဖွင့်ဖြစ်သည်။ လူပျိုလူလွတ် ဆရာဝန်ဆိုတော့ ဆေးခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုလတ်နာမည်က ရေပန်းစားသည်။ .. ရှုပ်ပွေသူအဖြစ်လဲ နာမည်ထွက်သည်။ .. သို့ပေမယ့် မိန်းကလေးများထုံးစံအတိုင်း ရှုပ်သူပွေသူဟု နာမည်ကြီးသူတွေဆို ပိုကပ်တတ် ရောတတ်သည့် အတွက် ကိုလတ်ဘေးနားမှာ မိန်းကလေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလေသည်။ ..
ကိုလတ်ကတော့ အခွင့်သင့်လျှင် သင့်သလို အခြေအနေပေးလျှင် ပေးသလို စိတ်ကြိုက်ရာကို ဆွတ်ခူးစားသုံးရင်း လူပျိုဘ၀ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေလေတော့သည်။ ‘ ဝါး ဟား … ‘ အိပ်ငိုက်သလိုလိုဖြစ်လာသည်မို့ ကိုလတ် သန်းဝေလိုက်မိသည်။ လက်ပါတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်တော့ ကိုးနာရီခွဲလုပြီ။ .. လက်ထဲမှ ပလေးဘွိုင်းစာအုပ်ကို အသာခေါက်သိမ်းလိုက်ပြီး သိမ်းစရာရှိတာတွေ သိမ်းနှင့်ရန် ကိုလတ် ထလိုက်၏။ ပုဆိုးအောက်မှ ဖွားဘက်တော်က ပလေးဘွိုင်းစာအုပ်အရှိန်နှင့်တကြွကြွဖြစ်နေသည် ပုဆိုးဝတ်လျှင် အောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်လေ့မရှိသော ကိုလတ်အကျင့်က တခါတခါတော်တော်ဒုက္ခပေး၏။ ခုလဲ ဖွားဘက်တော်ငြိမ်အောင် ခနစောင့်ရသေးသည်။ နို့မဟုတ် လူမြင်လို့မှ ကောင်းမည်မဟုတ်။ … ‘ ဆရာ .. ဆရာရှိသေးလားဟင် … ‘ ဆေးခန်းတံခါးတခြမ်းပိတ်ထားလိုက်ပြီး အတွင်းဘက်လူနာစမ်းသပ်ခန်းထဲဝင်ကာ နားကြပ်တွေဘာတွေ သိမ်းနေသော ကိုလတ်နားထဲသို့ ဆည်းလည်းသံလေးတခုတိုးဝင်လာသည်။ .. ပြန်မည်လုပ်ခါမှ လူနာက လာနေပြန်ပြီထင်သည်။ ကိုလတ် နဲနဲကျွဲမြီးတိုသွားရ၏။ တခါတခါကျ လူနာတွေက ဒီလိုပါပဲ .. ဆေးခန်းဖွင့်ထားချိန်တောက်လျှောက်ကျ လူရှုပ်သည်ဘာသည်ဆိုပြီး လာမပြကြ၊ ဆေးခန်းပိတ်ပြီး ပြန်တော့မည်ဆိုလျှင် တယောက်ပြီးတယောက် ရောက်ရောက်လာတတ်သည်။
‘ ကိုးနာရီခွဲပြီဗျ .. ဆေးခန်းပိတ်တော့မလို့ … သြော် … မီမီ ပါလား .. ‘ ကိုလတ်ဘုတောသံက တ၀က်တပျက်နှင့်ရပ်သွားရသည်။ ရေစိုနေသောထီးလေးကို ကိုင်ထားသည့် ချစ်စရာ မိန်းကလေးကို သူကောင်းကောင်းသိသည်ကိုး .. ။ လမ်းထိပ်နားမှ မီမီရယ်လေ .. မနှစ်ကမှ ယောကျာ်း ဆုံးထားသည့် ပူပူနွေးနွေး မုဆိုးမလေး မီမီ။ .. ‘ ဆောရီးနော် ဆရာ … ဆရာနဲ့ သေသေချာချာတိုင်ပင်ချင်လို့ ဆေးခန်းလူရှင်းချိန်ကျမှ ရွေးပြီးလာခဲ့တာ၊ အနှောက်အယှက်ပေးမိသလိုများ ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူး .. အားနာလိုက်တာ .. ‘ မီမီက မျက်လုံးလေး ပုတ်ကလပ်ပုတ်ကလပ်လုပ်ရင်း တောင်းပန်နေသည်။ .. ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့လေ။ .. ဒီလောက်လှသည့် မုဆိုးမလေးပဲဟာ .. ။ ‘ ရပါတယ် မီမီရယ် … ပြောနေရမယ့်သူတွေမှ မဟုတ်တာ … ကဲပြော .. ကျနော်ဘာကူညီရမလဲ ‘ ကိုလတ်လေသံပြောင်းသွားတော့မှ မီမီ အားတက်သွားရသည်။ နောက်နေ့မှလာလို့များ ပြောလွှတ်လေမလားဟု ဆေးခန်းအလာတလျှောက်လုံး တွေးပူနေခဲ့ရသည်လေ။ .. လက်ထဲမှ မိုးရေစိုနေသောခေါက်ထီးလေးကို ထီးထည့်သည့်ပုံးထဲ မီမီထည့်လိုက်၏။ ဘေးဘီကို စိတ်မလုံ သလို အသာအကဲခပ်သည်။ ‘ စိတ်ချသာ ပြောပါ မီမီ … ဒီနေ့ အကူကောင်လေးမလာလို့ ကျနော်တယောက်ထဲရှိတာ .. ‘ ကိုလတ်က မီမီ့အနေအထားကို အကဲခပ်မိသဖြင့် ရှင်းပြလိုက်ရ၏။ ခါတိုင်းဆို ကောင်လေးနှင့် ကိုလတ် အတူပြန်ပြီး လမ်းကျမှ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် ချပေးနေကြ။ ဒီနေ့တော့ ကောင်လေး သွားစရာရှိလို့ ခွင့်တိုင်ထားသည်မို့ သူတယောက်တည်းသာ .. ။ ကိုလတ်စကားကြောင့် မီမီ သက်ပြင်းလေး အသာချလိုက်သည်။ ရှက်ရွံ့ဟန်နှင့် မျက်လွှာလေးချလိုက်ရင်း တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။ ‘ ဒီ .. ဒီလိုပါဆရာ … မီမီ သွေးမပေါ်တာ ၂လရှိနေပြီ အဲဒါ .. အဲဒါ .. ‘ ကျန်းကျန်းမာမာ တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့် ချစ်စဖွယ် လင်သေမုဆိုးမလေး .. သွေးထိန်နေတာကို ရှက်ရှက်နှင့်ပြောနေပြီဆိုမှတော့ တခြားဘာများဖြစ်နိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ .. ခိုးစားတာ လူမိလေပြီပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေလဲ ရှိသေးသည်မို့ ကိုလတ် တာဝန်အရ ရှင်းပြရလေသည်။
‘ တခါတခါ ဒီလိုပဲ သွေးထိန်တတ်တာပဲ မီမီရဲ့ .. ‘ မီမီမျက်နှာလေး ရဲတက်လာသည်။ .. သက်ပြင်းတချက်ကို ရှိုက်လိုက်ရင်း မပွင့်တပွင့်လေး ပြောလာပြန် လေ၏။ ‘ မဟုတ်ဖူးဆရာ .. မီမီက သွေးသိပ်မှန်တာ။ .. ရက်တောင် လွဲလေ့မရှိဘူး။ ခုဟာက .. ခုဟာက .. ‘ ‘ ရပြီ .. ဒီလောက်ဆို ဆရာနားလည်ပြီ .. ။ ကဲပြော .. မီမီဘာဖြစ်ချင်လဲ .. ‘ ‘ သွေးပေါ်ဆေးတွေဘာတွေ ထိုးပေးလို့ မရဘူးလား ဆရာ … ‘ ကိုလတ် ခေါင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းခါမိသည်။ အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ သွေးပေါ်ဆေး သွေးပေါ်ဆေးနှင့် လူသိများလှသော ထိုးဆေးတွေက တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာသာဆိုလျှင် ဘာမှ မတတ်နိုင်။ .. လူအများက နားလည်မှုတွေ လွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ သွေးပေါ်ဆေးက ကိုယ်ဝန်မရှိပဲ တခြားအကြောင်းကြောင့် သွေးထိန်နေတာမျိုးမှ စွမ်းတာ မီမီရဲ့ .. ‘ ကိုလတ်စကားကြောင့် မီမီ နီးရာခုံတခုပေါ် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်ချလိုက်မိသည်။ ‘ အဲဒါမှ ခက်တော့တာပါပဲ ဆရာရယ် … ခုဟာက ကိုယ်ဝန်ရှိတာလို့ မီမီတော့ထင်တာပဲ .. ဟင်း .. ‘ မီမီဝတ်ထားသည်က လည်ပင်းတော်တော်ဟိုက်သော တီရှပ်လက်တိုကလေး .. ။ ကိုလတ်ရှေ့တည့်တည့်တွင် ထိုင်ချလိုက်တော့ လည်ဟိုက်ကြားမှ ရင်နှစ်မွှာကွဲကြောင်းလေးက မျက်စိထဲကို ထင်းကနဲ ၀င်လာသည်။ အသာမိုးကြည့်လိုက်တော့ နို့အုံအပေါ်ပိုင်းလေးတွေကိုပင် မြင်နေရ၏။ စောစော တုန်းက ပလေးဘွိုင်းဖတ်ထားသော အရှိန်က မသေသေးသည်မို့ ကိုလတ်သွေးတွေ ဆူလာသည်။ ‘ မီမီတကယ်တမ်းလိုအပ်မယ်ဆိုရင် တောင်ဥက္ကလာဘက်မှာ ကျနော့်အသိ ဆရာဝန်မတယောက်ရှိပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ကူညီနေကြလေ .. ခက်တာက .. ‘ ‘ ခက်တာက ဘာလဲဟင် ဆရာရယ် .. လုပ်ပါဦး .. မီမီ ဆရာ့ကို အားကိုးပါတယ်ရှင် .. ‘ ‘ ခက်တာက ဒါဟာ တကယ်ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် လုပ်ရဦးမယ် မီမီရဲ့ .. ‘ ‘ ဆီးစစ်ကြည့်ရမှာလား ဆရာ … ‘ ကိုလတ် အသာပြုံးလိုက်မိသည်။ သူဆင်သော အကွက်ထဲတော့ မီမီတယောက် ၀င်လာလေပြီ။ .. ‘ ဆီးစစ်တာက မသေချာလှသေးဘူး မီမီရဲ့ .. သေချာချင်ရင် အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာ ….. ‘ ‘ အို … ‘ မီမီ့မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားသည်။ ခေါင်းလေးက ငုံ့ကျသွားရ၏။ ကိုလတ်က ဟန်ကိုယ့်ဘို့ ဆိုသလို အသာ မှင်နှင့်မောင်းနှင့် ဆက်ပြောလိုက်ပြန်၏။ ‘ မီမီရှက်နေရင် နောက်နေ့မှ မိန်းကလေးဖော်တယောက်ယောက်ခေါ်လာပြီး စမ်းလေ .. ။ ဒါမှမဟုတ် လေဒီဒေါက်တာ တယောက်ယောက်ကိုပဲ သွားပြချင် ပြပါလား .. ‘ ပြောမယ့်သာပြောလိုက်ရသည်၊ မီမီ သူပြောသလို တကယ်သဘောတူသွားရင် အခက် ဟု ကိုလတ်တွေးနေ မိလေ၏။ .. မုန့်က ပါးစပ်နားရောက်နေပြီမို့ မစားလိုက်ရလျှင်တော့ ကိုလတ်တို့ ရာဇ၀င်ရိုင်းရော့မည်။ ကိုလတ် ဆုတောင်းပြည့်သည်ပြောရမည်။ မီမီက ခနစဉ်းစားသလိုလေးလုပ်နေပြီးမှ သက်ပြင်းလေးတချက် ချရင်း စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချလိုက်လေ၏။ ‘ မထူးပါဘူး ဆရာရယ် … ။ ဒါနဲ့ပဲ ရက်တွေ သိပ်ကြာသွားဦးမယ်။ …
ဆရာပဲ စမ်းပေးပါတော့ … ‘ ကိုလတ် တံတွေးကို အသာမြိုလိုက်မိသည်။ စားရကံတော့ ကြုံလေပြီ။ ‘ ကဲကဲ .. လာ။ ဒါဆိုလဲ အခန်းထဲသွားရအောင် … သြော် … တံခါးကြီးတော့ ပိတ်ခဲ့မယ်နော် … တော်ကြာ စမ်းနေတုန်း သူများတွေ ရုတ်တရက် ၀င်လာမှာစိုးလို့ … ‘ မီမီ့အတွက် ရတက်မအေးဟန်နှင့် ကိုလတ်က ဆေးခန်းအ၀င်တံခါးကို တ၀က်ပိတ်ထားရာမှ အကုန်ပိတ် ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်တော့ နုနုထွားထွား မုဆိုးမလေးကို ဦးဆောင်ကာ အတွင်းဘက် လူနာစမ်းသပ် ခန်းထဲ ၀င်လာလိုက်တော့၏။ မီမီက ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း ဆင်မယဉ်သာ ဟန်လေးနှင့် ကိုလတ်နောက်က လိုက်လာသည်။ အတွင်းခန်းသို့ရောက်လေပြီ။ ‘ ကဲ .. မီမီ တက် ‘ ကိုလတ်က ပြောလဲပြော မီမီ့လက်လေးကိုလဲ အသာဆွဲကာ ကုတင်ပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်သည်။ မီမီ့လက်ဖျား လေးတွေ အေးစက်နေတာ သတိထားမိလိုက်၏။ ကုတင်က အနည်းငယ်မြင့်သည်မို့ မီမီက တဖက်စောင်းကာ လက်လေးနှင့်ထောက်ပြီးတက်ရသည်။ ခြေဖျားလေးတွေက အောက်မှ ခုထားသော ခုံလေးပေါ်ထောက်ပြီး တင်ပါးကို တစောင်းလှမ်းတင်လိုက်ရ၏ ကိုလတ်က သူ့ဘက်သို့လှည့်ကာ ကုန်းပြပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားသော မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေကို အားမနာတမ်း အနီးကပ်ကြည့်ပြစ်လိုက်သည်။
စောစောက မနဲချိုးနှိမ်ထားရသော ဖွားဘက်တော်က ရုန်းထလာသည်။ .. ခုတင်စောင်းနှင့် မနဲဖိထားလိုက်ရသည်။ ‘ ဟင်း … ‘ ကုတင်ပေါ်ရောက်ပြီးသည်နှင့် မီမီက မျက်လုံးလေးများ အသာမှိတ်ကာ သက်ပြင်းလေးတချက် မှုတ်ထုတ် လိုက်ပြန်၏။ ကိုလတ် အတတ်သိလိုက်ပြီ … ဒီကောင်မလေးလဲ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီ။ … ဟန်ကိုယ့်ဘို့ ဆိုသလို တရှိန်ရှိန်တက်နေသော စိတ်ကို အသာချိုးနှိမ်ယင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း သွေးပေါင်အရင် ချိန်ပေးလိုက်၏။ .. ဒါတောင် လူကနေပေမယ့် လက်က မနေ။ .. သွေးပေါင်ချိန်ကရိယာ ပြန်အဖြုတ်တွင် ကိုလတ်လက်တွေက မီမီ့နို့ကြီးတွေကို မထိတထိ ပွတ်သွားလိုက်သေးသည်။ မီမီ မသိမသာလေး တွန့်သွားတာ .. ခြေဖျားလေးတွေ ကုပ်ကွေးသွားတာ ကိုလတ် သတိထားမိသည်။ မီမီ့တကိုယ်လုံးက ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လေးမို့ ရှိုက်ကြီးဖိုငယ်အသွယ်သွယ်က မကြည့်ချင် မြင်လျက်သား ဆိုသလို ဖြစ်နေရလေသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ ကြည့်ချင်ချင်ကြီးနှင့်ကို ကြည့်နေခြင်းပါ။ ‘ ကဲ … မီမီရေ … စမ်းကြစို့နော် … မရှက်နဲ့ သိလား … ‘ အာတွေခြောက်တက်လာသည်မို့ ကိုလတ် တံတွေးကို ခနခန မြိုချနေရ၏။ ဒီစကားလေး ပြောထွက်လာဖို့ မနဲကို အရှိန်ယူလိုက်ရသည်။ မီမီကတော့ ဘာစကားမှတောင် ပြန်မပြောနိုင်ရှာ။ … ခေါင်းလေးသာ အနိုင်နိုင် ညိတ်ပြလိုက်ရသည်။ ကိုလတ်က မီမီ့ထမီအထက်ဆင်စလေးကို အသာဖြုတ်သည်။ … မီမီက ဗိုက်လေးရှပ်ပေးထားပြီး ကိုလတ် ဖြုတ်ရလွယ်အောင် ကူညီပေးနေ၏။ လူကတော့ မလှုပ် … မျက်စိလဲ စုံမှိတ်ထားသည်။ .. အထက်ဆင်စလေး ပြုတ်သွားလေပြီ။ .. ကိုလတ်က အစက မီမီဝတ်ထားတာ ရိုးရိုးထမီထင်နေမိသည်။ ..
အခု ထက်ဆင်ဖြုတ်လိုက်မှ ခါးတွင်အထက်ဆင်စ ချည်ပြီး ၀တ်ရသော စကပ်ထမီမှန်း သိရသည်။ ဟန်ကျသည်ပေါ့ … အထက်ဆင်စ ဖြည်လိုက်သည်နှင့် ခါးအကွဲစလေးက ဟထွက်သွားသည်။ .. ဒါပေမယ့် မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေက ဖွံ့ထွားလှသည်မို့ လွယ်လွယ်နှင့်တော့ စကပ်ထမီလေးက အောက်လျှောချလို့ မရ။ .. ‘ မီမီ … တင်ပါးလေး နဲနဲ ကြွပေးဦးနော် … ‘ ကိုလတ်အသံက အဝေးတနေရာမှ လာနေသလို မီမီ့နားထဲ ခံစားနေရ၏။ စိတ်ညှို့ခံနေရသူလို မီမီဘာမှကို ပြန်မပြောနိုင်။ .. သူပြောသလို ခါးလေးကို အသာပင့်ကာ သာ တင်ပါးကြီးတွေကို ကြွပေးလိုက်မိရသည်။ ကိုလတ်က အလိုက်သင့်ဆိုသလိုပင် စကပ်ထမီလေးကို အောက်ဖက် တဖြည်းဖြည်း ဆွဲချလိုက်၏။ ဆေးခန်းလာပြရသည်မို့လားမသိ .. ။ မီမီ့တွင် အောက်ခံ ဘာမှ မ၀တ်ထားပါ။ .. ကိုလတ်က စကပ်ထမီလေးကို ဆွဲချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မီမီ့ ရတနာလေးက ၀င့်ကြွားစွာ ၀င်းဝင်းပပ ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ မဂိုသွေးပါသူမို့လားမသိ … မီမီက အမွှေးအမျှင်တွေ ပြောင်နေအောင်ကို ရိတ်ထားသည်။
မဖြူမညိုအသားလေးနှင့် လိုက်လျှောညီထွေစွာပင် မီမီ့ဆီးခုံလေးက မို့မောက်တက်နေ၏။ .. ပေါင်တံထိပ်ဖျားတွေကတော့ အပြင်အသားအရေထက်ကို ပိုပြီး ဖြူဝင်းတောက်ပနေသည်။ … ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာ အတွင်းဝယ် သာမာန်မိန်းကလေးတွေထက် သိသိသာသာကြီးကို ပိုကြီးသော အစေ့လေးက ပြူးထွက်နေ၏ … ။ ကိုလတ်ကို မျက်စပစ်ပြ နေသလိုလို .. ။ ကိုလတ်က လက်အိတ်စွပ်လိုက်သည်။ … အမှန်က ဒါမျိုးစမ်းမည်ဆိုလျှင် ပိုးသတ်ထားသော ရာဘာလက်အိတ် အထူကို စွပ်ရမည်။ သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က အကြံကြီးနှင့်မို့ ရိုးရိုး သွေးဖောက်တာတွေ ဘာတွေမှာသုံးသည့် ရာဘာလက်အိတ်အပါးလေးပဲ စွပ်လိုက်၏။ မီမီကတော့ ဘာမှ မသိရှာ … ။ ကိုလတ်ပြုသမျှ နုတော့မည့်ပုံနှင့် ပျော့ပျော့ကျော့ကျော့လေး လှဲနေလေသည်။ ကိုလတ်က မီမီ့ပေါင်ကြားထဲသို့ သူ့ညာဘက်လက်ကြီးကို သွင်းလိုက်၏။ ဘယ်လက်ကတော့ မီမီ့ခါးကို အသာလှမ်းကိုင်ထားသည်။ မီမီက အလိုက်သင့်ပင် ပေါင်ကြီးတွေကို ကားပေးလိုက်သည်။ စောစောက ဒူးလောက်ရောက်အောင် ဆွဲချထားသော စကပ်ထမီလေးက မီမီ ပေါင်ကားပေးလိုက်မှုကြောင့် အောက်သို့ တွန်းချလိုက်သလိုဖြစ်ကာ ခြေဖျားထိလျှောကျသွားတော့၏။ ကိုလတ် အသက်ကိုမှန်အောင် မနဲထိမ်းရှုယင်း မီမီ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ လက်ညှိုးကို စထိုးသွင်းလိုက်၏ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်လျှင် လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးနှင့် စမ်းရမြဲဖြစ်သော်လည်း မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးက အပျိုနှင့်မခြား တင်းကြပ်စိရိနေသည်မို့ တချောင်းထဲနှင့်ပဲ အရင် သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင်မှ ကိုလတ်လက်ညှိုးက ပုဇွန်ကျစ်စာတွင်းထဲ ထိုးထည့်ရသည့်အလား စီးပိုင်တင်းကြပ်နေသည်။ …
‘ အ …. ‘ မီမီ့နှုတ်မှ မပွင့်တပွင့် အသံလေး ပွင့်အံထွက်လာ၏။ ကိုယ်လုံးလေးလဲ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားသည်။ .. ခါးလေးက မသိမသာ ကော့တက်လာကာ ပေါင်တံကြီးတွေက ပိုကားထွက်သွားသည်။ ‘ မီမီ နာသွားလို့လားဟင် … ‘ ကိုလတ်က အမှန်အကန်စမ်းသလို မစမ်းပဲ လက်ညှိုးကို အတွင်းထဲတွင် ပတ်လည်လှည့်ကလိပေးနေရင်း မသိဟန်ဆောင်ကာ မေးလိုက်၏။ ခါးလေးကို ထိန်းကိုင်ပေးထားသော ဘယ်လက်ကလဲ မသိသလိုလိုနှင့် အောက်ဖက်လျှောဆင်းလာပြီး မီမီ့တင်သား ထွားထွားအိအိကြီးတွေကို အသာဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လာသည်။ အထိအတွေ့က ထူးလှ၏။ .. ကိုလတ် စိတ်ရိုင်းတွေ ပိုဆင်လာသည်။ ‘ နာရင်ပြောနော် … အားမနာနဲ့သိလား … ‘ ပါးစပ်ကသာ တွေ့ကရာတွေလျှောက်ပြောနေသော်လည်း ကိုလတ် လက်တွေက စနစ်တကျ လှုပ်ရှားလာပြီ၊ လက်ညှိုးတချောင်းထဲထိုးသွင်းထားရာမှ လက်ခလယ်ကိုပါ စစ်ကူယူလာသည်။ နှစ်ချောင်းပူးဖြင့် မီမီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလာသည်။ .. မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးကလဲ အရည်တွေ စိုရွှဲထွက်လာပြီမို့ ကိုလတ်လက်နှစ်ချောင်းပူးကို မဖြုံတော့ပေ။ ကိုလတ်က အပီပင် လက်တဆုံးထိုးသွင်းလိုက် .. ပါတ်လည်လှည့်ကာ မွှေနှောက်ပေးလိုက် .. ဘေးနံရံလေးတွေကို တဆတ်ဆတ်ထိုးဆွလိုက် .. သားအိမ်ခေါင်းနေရာလေးကို ဖိထိုးလိုက် လုပ်ပေးနေသည်။ မီမီ တဆတ်ဆတ်တုန်လေပြီ … ကိုလတ် ဘာလုပ်နေပြီမှန်းလဲ ရိပ်မိပြီ။ .. သို့ပေမယ့် ဘာမှလဲ မပြောသာ .. မရုန်းသာ .. ။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ အသွေးထဲအသားထဲက ကာမဇောတွေ တရှိန်ရှိန် တက်နေရလေပြီကိုး .. ။ ‘ အား ဟာ့ဟာ့ …. ဆရာ ဆရာ ရယ် … ‘ ကိုလတ်က လက်ညှိုးလက်ခလယ်ပူးကို အဆုံးထိုးသွင်းဖိထားရင်း လက်မက အ၀မှ အစေ့လေးကို ဆွပေးလိုက်တော့ မီမီ မနေနိုင်တော့။ .. အသံတွေပင်ထွက်လာရတော့သည်။ .. ခုနက ခပ်ပျော့ပျော့လေး လှဲနေရာမှ ခုတော့ ခြေဖဝါးတွေ ခုတင်ပေါ်အပြားလိုက်ချကာ တင်ပါးကြီးတခုလုံး တထွာနီးပါး မြောက်တက် လာသည်အထိကို ကော့တင်ပေးနေတော့သည်။ ‘ မီမီ ခံလို့ကောင်းလားဟင် … ‘ ကိုလတ်က ဗြောင်ပင် မေးလာတော့သည်။ ..
အပွဲပွဲနွှဲခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သော သူရဲကောင်းမို့ ဒီတပွဲလဲ သူကောင်းကောင်းကြီး အောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီမှန်း ဗေဒင်မေးစရာမလိုပဲ ကိုလတ် အတတ်သိနေလေပြီကိုး … ။ ‘ ကောင်းတယ် ဆရာရယ် … ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိဘူး … အားရှီး …. ‘ တော်ယုံမိန်းကလေးဆို ဒီလောက်နှင့် စကားမေးမရတတ်သေး။ … မသကာ ခေါင်းလေးညိမ့်ပြယုံလောက်ပဲ ရှိမည်။ .. မီမီကတော့ မုဆိုးမလေးလဲဖြစ်ပြန် .. ကာမဇောလဲ ထန်လှသူမို့ ရှက်တာတွေ ကြောက်တာတွေ ခနနှင့် လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားလေပြီ။ … ကိုလတ်က ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို ပြုံးလိုက်၏။ .. ရေကန်အသင့် ကြာအတင့်ဆိုသလိုပင် အပြင်တွင်လဲ မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်းရွာလာပြန်သည်။ … အပြင်ကလူတွေ ရောက်လာစရာမမြင်တော့။ .. ရောက်လာလဲ ပိတ်ထားသော ဆေးခန်းတံခါးကိုကြည့်ပြီး ဆရာဝန်ပြန်သွားပြီပဲမှတ်ကြမည်။ ကိုလတ်၏ ကားက ဆေးခန်းအ၀တွင်မရပ်ပဲ ရပ်ရန်လွယ်သော လမ်းထိပ်နားက မြေကွက်လွတ်ကြီးရှေ့တွင် ရပ်ထား ခြင်းဖြစ်ရာ နောက်ကြောင်းက အကုန်ရှင်းနေလေပြီ။ .. ‘ အမယ်လေးလေး … ဆရာ ဆရာရယ် … ဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တာလဲရှင် .. အား ဟားဟား အူး … ‘ ကိုလတ်က ဂျီစပေါ့တ် ဟုခေါ်သည့် ဆီးအိမ်အောက်နား စောက်ဖုတ်ရှေ့ဘက်နံရံကို အတင်းထိုးဖိကာ ဆွပေးလိုက်တော့ မီမီ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရတော့သည်။ … အရည်တွေလဲ ပွက်ခနဲကို ထွက်ကျလာရာ ကိုလတ် လက်အိတ်ပေါ်မှာပင် ရွှဲအိုင်သွားရသည်။ … ပြီးရှာလေပြီပေါ့ တချီ .. မီမီလေးရယ် ။ ကော့တင်ပေးထားသော မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေက စမ်းသပ်ခုတင်လေးပေါ် ဝုန်းကနဲ ပြန်ပစ်ချလိုက်သလို ကျသွားသည်။ .. မီမီခေါင်းလေးကို တဖက်စောင်းကာ အသက်ကို မှန်မှန်ပြန်ရှုနေရ၏။ ဖွံ့ထွားသော မီမီ့နို့ကြီးတွေက နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှင့် လှိုင်းထနေရသည်။ ကိုလတ်ကတော့ ဒါကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အရသာခံကြည့်နေလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ လက်ကိုတော့ မထုတ်သေး … မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးက ရှုံ့လိုက်ပွလိုက်နှင့် ကိုလတ်လက်ချောင်းတွေကို ညှစ်နေဆဲရှိသေးသည်။ ခနနေတော့ ကိုလတ် ရှေ့တဆင့်တက်ရန် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်၏။ မီမီ့ကိုယ်လေးကို ခုတင်အောက်ဖက်ဇောင်းရောက်အောင် အသာဆွဲချလိုက်သည်။ ..
မီမီက မျက်လုံးလေး အသာမှေးကာ လှမ်းကြည့်သည်။ .. ဘာမှတော့ မပြော၊ .. ရုန်းတာကန်တာတွေလဲ မလုပ်။ မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေ ခုတင်အောက်ဖက်ဇောင်းပေါ်တင်မိတော့ ကိုလတ်က ခုတင်စောင်းမှာ မှီပြီးရပ်လိုက်သည်။ မီမီ့ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းကို တစ်တီတူးထောင်လို အပေါ်မြှောက်တင်လိုက်၏။ … တချိန်တည်းမှာ ကိုလတ်လုံချည်ကလဲ ကွင်းလုံးကျွတ်သွားပြီ။ .. ကျောဘက်တွင် မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးလို ဖုထွက်နေသော ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးနှင့် ကိုလတ် လိင်တံကြီးက အမဲသားနံ့ရနေသော ကျားကြီးလို အာသာငမ်းငမ်း ထွက်ပေါ်လာလေတော့၏။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသောကြောင့် မီမီ့တင်သားကြီးတွေကို ထိုးမိထောက်မိဖြစ်နေသည်။ မီမီကတော့ အံတင်းတင်းကြိတ်ကာ ခုတင်ဘေးစောင်းတွေကို သူမလက်လေးတွေက ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင် ထားလေ၏။ ကိုလတ် ရှေ့တဆင့်တက်လာမှာကို အသင့်ကြိုလင့်နေသည့်အလား … ။ ကိုလတ်က ချက်ခြင်းရှေ့မဆက်သေး …။ လက်အိတ်ကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ … မီမီ့အရည်တွေက လက်အိတ်ပေါ်တွင် ရွှဲအိုင်သွားသည်ဖြစ်ရာ လက်အိတ်အထဲမှ ကိုလတ်လက်ပင် အစိုပြန်ကာ နူးအိနေရသည်။ နူးအိကာ အစိုပြန်နေသော ကိုလတ်လက်နွေးနွေးကြီးတွေက မီမီ့ တီရှပ်လေးပေါ်မှ အုပ်ကာ ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုး တွေကို အုပ်ကိုင်လာတော့သည်။ မီမီ ပါးစပ်လေး ဟ သွားကာ ပင့်သက်ရှိုက်သွားမိရ၏။ ‘ အမေ့ … ‘ အောက်ဖက်တွင်သာ ကိုလတ် ပွဲကြမ်းလိမ့်မည်ဟု ထင်ထားမိနေချိန်တွင် မမျှော်လင့်ပဲ အပေါ်ပိုင်းကို တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသဖြင့် အငိုက်မိသွားသော စစ်သည်တဦး ပမာ မီမီ အမေပင် တလိုက်မိရသည်။ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေအပေါ်မှ သူမလက်လေးနှင့် ကပျာကယာ အုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ ကိုလတ်ကတော့ မီမီ့နို့အုံအိအိထွားထွားကြီးတွေကို မညှာမတာပင် ဆုပ်ကိုင်ညှစ်နယ်လေတော့၏။ တီရှပ်လေးပင် ပြဲသွားတော့မလား အောက်မေ့ရသည်။ မီမီ နာလဲနာသည် … ခံလို့လဲ ကောင်းလှသည်။ .. ကိုလတ်လက်ကြီးတွေပေါ်အုပ်ကိုင်ထားသော သူမ၏ လက်လေးတွေက ပထမတော့ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေကို ဆွဲဖယ်မလိုလိုနှင့် နောက်တော့ မသိမသာ ကူညီ ဖိပေးနေမိလျှက်သားဖြစ်သွားရသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ သူ့လက်အားကော မီမီ ဖိပေးနေသည့်အားကိုပါ ယူကာ အပီကို ပွဲကြမ်းပြစ်လိုက်လေတော့သည်။
‘ အား … ရှီး … ဟင်း ဟင်း … ‘ အဖျားတက်နေသော လူမမာပမာ မီမီ့နှုတ်မှညဉ်းသံလေးတွေ တရစပ်ထွက်လာသည်။ ရင်ဘတ်လေးကလဲ ကော့တက်လာသည်။ .. မီမီဝတ်ထားသော တီရှပ်လေးက ပါးပါးလေးနှင့် လည်ကလဲ တော်တော်ဟိုက်သည်ဖြစ်ရာ ကိုလတ်ခုလို အပီပွဲကြမ်းနေတော့ နို့အုံကြီးတွေက လည်ဟိုက်အပေါက်လေးထဲမှပင် လျှံထွက်လာတော့မလိုဖြစ်နေရ လေ၏။ အတွင်းမှ ဘရာစီယာလေးကလဲ ရင်ပုံခွက်တခြား နို့တခြားဖြစ်နေလေပြီ။ … ကိုလတ်က ဒါကိုပင် အားမရလေဟန်နှင့် မီမီ့ တီရှပ်လေးကို ခါးအောက်စမှ ကိုင်ကာ အတင်းလှန်ချွတ်၏။ မီမီက လက်လေးနှစ်ဖက်မြှောက်ပေးကာ ကိုလတ်ချွတ်ရလွယ်အောင် ကူညီပေးသည်။ … တီရှပ်လေးကျွတ် သွားပြီးတော့ ဘရာစီယာကိုတော့ ကိုလတ်က အချိန်ကုန်ခံကာ ချွတ်မနေတော့။ .. နို့အုံတွေအောက်မှ ဆွဲလှန်ကာ မတင်လိုက်တော့သည်။ … ဘော်လီမဟုတ်သည့်အတွက် ဒီလို မတင်လိုက်သည်နှင့်ပင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားကာ နို့နှစ်လုံးက အပြိုင်ပြူးထွက်လာသည်။ မုဆိုးမလေးပေမယ့် ကလေး မမွေးဘူးသေးသည်မို့ မီမီ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အပျိုလေးတွေလိုပင် နီနီရဲရဲလေးတွေဖြစ်၏။ .. ရာဂစိတ်မွှန်နေချိန်မို့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ချွန်ကော့စူတက်နေသည်။ … ကိုလတ်က မီမီ့ရင်ဘတ်ပေါ်ခေါင်းတခုလုံးမှောက်ချကာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ငုံစုပ်ကာစို့လိုက်၏။ ‘ ပြွတ် ပြွတ် … အင်း ဟား …. ‘ မီမီ ကော့လန်တက်သွားသည်။ ကိုလတ်ခေါင်းကြီးကိုလဲ လက်နှစ်ဖက်နှင့်အတင်းဖိကာ သူမရင်ဘတ်ပေါ်ဖိတွန်းထားလိုက်မိ၏။ ကိုလတ်ကတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့ရာမှ နို့အုံသားကြီးတွေပါ ပါးစပ်ထဲဝင်နိုင်သမျှ ၀င်သည်အထိ အာကို အားရပါးရဖြဲကာ စုပ်သွင်းနေပြန်သည်။ .. မီမီ့နို့ကြီးတွေ သွေးချည်ဥကုန်ပြီလားပင် ထင်ရသည်။ အာခေါင်ထဲဝင်လာသော နို့အုံသား နူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေကိုလဲ သွားနှင့် မနာ့တနာ ကိုက်ခြစ်ပေးနေပြန်၏ နို့စို့နေရင်းမှ ကိုလတ် လက်ကလဲ အအားမနေ။ .. အောက်ဖက်ကိုလှမ်းပြီး မီမီ့ဆီးခုံလေးပေါ်ပွတ်သပ်ရင်း အစေ့လေးကို လက်ညှိုးလက်မနှင့် ဖိညှပ်ဆော့ကစားပေးနေသေးသည်။ ‘ အင့် ဟင့်ဟင့် … တော်ပါတော့ ဆရာရယ် … လိုးမှာဖြင့်လဲ လိုးပါတော့ … မီမီခံရခက်လှပြီ .. ‘ ဒီလိုပဲ ဖြစ်လာရမည်လေ။ … အနှူးအနှပ်တော်သည့် ယောကျာ်းမျိုးနှင့်တွေ့လျှင် အဘယ်မိန်းကလေးမဆို ဒီလိုပဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် တောင်းဆိုလာရပေမည်ပေါ့။ .. ခုလဲ ကိုလတ် မီမီ့ကို အပိုင်ချည်နှောင်လိုက်ပြီလေ။ မီမီ့တောင်းပန်သံဆုံးသည်နှင့် ကိုလတ် မီမီ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ခေါင်းပြန်ကြွလိုက်သည်။ နောက်သို့ အနည်းငယ်ပြန်ဆုတ်ပြီး နေရာယူသည်။ .. ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးနှင့် ပနံတင့်နေသော သူ့လိင်တံကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ တဆဆလုပ်ရင်း မီမီ့ဆီးခုံလေးပေါ်ကို ဖတ်ကနဲဖတ်ကနဲ သုံးလေးချက် ရိုက်ပေးလိုက်သည်။ .. ‘ အာ့ အာ့ ….. ‘ မီမီဖျတ်ဖျတ်လူးသွားရရှာသည်။ ကိုလတ်ဟာကြီးက သူမအစေ့လေးကိုပင် လာရိုက်မိသဖြင့် ပြီးလုလုပင် ဖြစ်သွားရပြန်သည်။ ကိုလတ်သာ နောက်ထပ် ဆက်ရိုက်ပေးနေလျှင် တကယ်ပင် ပြီးသွားလောက်သည်။ သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က ဆက်မရိုက်တော့ .. ။ သူ့ဟာကြီးကိုသာ လက်နှင့်အသာထိန်းကိုင်ကာ မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ တေ့သွင်းလိုက်တော့သည်။
‘ ရှီး … အား လားလား … ‘ လိင်တံကြီးကျောဘက်မှ ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးက မီမီ့ ဂျီစပေါ့တ်ကို ကျကျနန ဖိနှိပ်ပွတ်တိုက်သွားသည်။ ရေထဲမှ ကုန်းပေါ်သို့ ဆွဲတင်ခံလိုက်ရသော ငါးကလေးလို မီမီ ပါးစပ်လေးဟကာ အသက်ငင်သလို ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်လေး ဖြစ်သွားရလေ၏။ … တကိုယ်လုံးလဲ တုန်တက်သွားသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကိုလတ်လီးချောင်းကြီးတခုလုံးက အတွင်းထဲထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အတင်းဖြဲကာ ထိုးဝင်လာတော့သည်။ အဆုံးရောက်တော့ သားအိမ်ခေါင်းလေးကို ဒုတ် ကနဲ တိုက်မိသွားသည်။ … မီမီမှာ ကိုယ်ဝန် ၂လရှိနေသည်မို့ အတွင်းသားလေးတွေ သားအိမ်ခေါင်းလေးတွေက နုဖတ်နေသည်။ မိန်းကလေးများ ဒီအချိန်တွင် လိုးလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ လိုးဖူးသူမှ ဒါကိုသိကြမည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ အတွေ့အကြုံစုံနေပြီမို့ ဒါကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ .. သိသည့်အတိုင်းလဲ သေသေချာချာကို ခံစားကာ လိုးလေတော့သည်။ … မျက်စိတွေကိုပင် မှေးထားကာ မီမီ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေ၏ အထိအတွေ့ကို အပီအပြင် ခံယူနေသည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် မဆောင့်ပဲ ဖြည်းဖြည်းလေး သာသာလေး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် .. စိမ်ပြီးနှပ်ထားလိုက် လုပ်နေသည်။ … ကိုလတ် က ဒီလိုလုပ်နေလေ မီမီကတော့ အာသာမပြေစွာနှင့် ဖျတ်ဖျတ်လူးလာလေပါပဲ။ … ကိုလတ်ရဲ့ထိချက်တွေများ ပိုပြင်းလာလိုလာလေငြားနှင့် အောက်ကနေ သူမဖင်ဆုံကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့ပင့်ဆောင့်မြှောက်ပေးနေသည်။ .. ကိုလတ်သိသည်၊ .. မီမီ ဘယ်လိုမှ အဆာမပြေဖြစ်နေရပြီ။ .. အမှန်ကတော့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားလေးများ၏ နူးညံ့သည့်အထိအတွေ့ကို ဆက်ခံစားနေချင်သေးသော်လည်း မီမီ့အလိုကိုဖြည့်ပေးဘို့ကလည်း တာဝန်ရှိသေးသည်မို့ ကိုလတ် ဗျူဟာပြောင်းလိုက်ရသည်။ မီမီ့ဖင်ဆုံကြီးအောက်သို့ လက်လျှိုကာ တင်သားအိအိကြီးများကို လက်နှင့်ကျကျနန ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မီမီ့ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းလိုက်ကာ ခါးအားကော တကိုယ်လုံးအားပါထုတ်သုံးပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချပေးလိုက်လေတော့သည်။ …
‘ ဖုံး ဖုံး … ဖုံးဖုံး … အ အ .. အ အ … ‘ မီမီတယောက် ခုမှပဲ အာသာပြေတော့သည်။ .. ကိုလတ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း စမ်းသပ်ခုတင်လေးက တအိအိလှုပ်ခါနေသလို မီမီ့တကိုယ်လုံး အထူးသဖြင့် နို့ကြီးတွေက ရမ်းခါနေရသည်။ .. ကိုလတ်က မကြည့်ရက်ဟန်နှင့် မီမီ့ နို့ကြီးတွေကို လက်နှင့်အသာ လှမ်းကိုင်ကာ ထိန်းထားပေးလိုက်တော့ မီမီ့လက်က ကိုလတ်လက်ကြီးတွေပေါ်ထပ်ကိုင်ရင်း အတင်းပဲ ဖိညှစ်နေသည်။ ဒီတော့လဲ ကိုလတ်လဲ မနေသာတော့ ..။ အသားကုန်ဆောင့်ကျုံးရင်းမှ လက်တွေကပါ နို့ကြီးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ပေးနေမိရတော့သည်။ … နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ မီမီ့တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်တက်လာကာ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်သွားရပြန်သည်။ … နောက်တချီ ပေါ့ … ။ မီမီ ပြီးသွားပြန်ပြီမှန်း သိတော့ ကိုလတ်က ဆောင့်ချက်တွေကို နှေးပေးလိုက်သည်။ မီမီ့ ကျိန်းစပ်နေသော အတွင်းသားလေးတွေကို ?
” ကိုပေါက် ” ဇာတ်လမ်းရှည် ( အစအဆုံး)